Madaxwaynaha Mareykanka Trump oo gaaray Kuuriyada Koonfureed – Radio Daljir
Madaxwaynaha Mareykanka Trump oo gaaray Kuuriyada Koonfureed
Noofember 7, 2017 5:50 b 0
Madaxwaynaya Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray wadanka Kuuriyada Koonfureed oo xiisad wayn oo siyaasadeed ay kala dhaxayso wadanka Kuuriyada Waqooyi, kana mid ah dowladaha Mareykanku uu xulufada la yahay ee qaaradda Asia.
Inta uu ku guda jiro booqashadiisa, Trump ayaa la filayaa inuu carabka ku adkeeyo balanqaadka ah Mareykanka inuu difaacayo dowladaha xulufada la’ ah khatar kaga timaada xukuumada Pyongyang iyo khilaafka gacanka Kuuriya.
Madaxwayne Trump ayaa Isniintii shalay kula kulmay magaalada Tokyo ee caasumadda Jabaan raysal wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe, labada masuul ayaana isku raacay dhamaan arrimaha xiisadda in looga wada hadlo miiska, waa haddii ay kuuriyada Waqooyi ay diyaar u tahay.
Abe, ayaa shir jara’id oo Trump kuwada qabteen hoolka Akasaka ee magaalada Tokyo ku sheegay inay lama huraan tahay xiisadda Kuuriyada Waqooyi waddo kasta in loo maro.
Ciidamada ammaanka ee Jubaland oo qabtay askarigii gabadha kudhaawacay Bosaso